Alemà any Pennsylvanie
Svan (any amin'ny tany iva ??)
Tenin’ny Tanana Albaney
Tenin’ny Tanana Britanika
Tenin’ny Tanana Estonianina
Tenin’ny Tanana Irlandey
Tenin’ny Tanana Italianina
Tenin’ny Tanana Kroaty
Tenin’ny Tanana Letonianina
Tenin’ny Tanana Népali
Tenin’ny Tanana Orogoayanina
Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina
Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec
Ny Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) no mamokatra sy mikarakara an’ity tranonkala ity. Raha tsy misy filazana manokana, dia fizaka-manana ara-tsaina (propriété intellectuelle) an’ny Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania daholo ny soratra sy fanazavana rehetra ato.
An’ny Adobe Systems Incorporated ny Adobe sy ny sary famantarana azy, ary ny Acrobat sy ny sary famantarana azy. An’ny Apple Inc. ny iTunes sy ny iPod. Samy manana ny tompony koa ireo sary famantarana hafa.
Ito fifanekena ito no mifehy an’izay mampiasa an’ity tranonkala ity. Manaiky an’izay rehetra voalazan’izy ito ianao, matoa mampiasa an’ity tranonkala ity. Tsy tokony hampiasa an’ity tranonkala ity àry ianao, raha tsy ekenao daholo izay voalazan’izy ito na misy tsy ekenao.
Inona avy no azonao atao? Azonao atao ny mijery, mandika, na manao pirinty ho anao ny sary, boky na gazety, mozika, soratra, na video ato amin’ity tranonkala ity, nefa tsy tokony hamidinao izany, araka ny fepetra voalaza etsy ambany ato amin’ito fifanekena ito. Tsy azonao atao àry ny:
Mametraka an’izay rehetra avy ato amin’ity tranonkala ity ho ao amin’ny Internet (tranonkala hafa, toerana ao amin’ny Internet azo ifampizarana rakitra, tranonkala fifaneraserana);
Mamoaka indray an’izay rehetra ato amin’ity tranonkala ity amin’ny alalan’ny na miaraka amin’ny programa hafa;
Mandika, mamoaka indray, na mampiasa ny soratra sy sary ato amin’ity tranonkala ity mba hamidy na hahazoam-bola (na dia tsy hakana tombony aza), anisan’izany ny hoe manaparitaka an’ireo programa mampandeha an’ireo zavatra ato amin’ity tranonkala ity na misy ifandraisany amin’ity, ary ampiasana serveur na tsia;
Miditra ato amin’ity tranonkala ity na mitady izay ifandraisana amin’izy ity, satria te hamorona sy hanaparitaka programa sy toromarika sy fitaovana ary teknika mitovy amin’ny an’ny ato, mba hakana avy hatrany na amin’ny fotoana efa raikitra izay zava-drehetra ato (anisan’izany izay rehetra mety ho fitrandrahana sy fanangonana ary fampiasana azy ireny);
Mampiasa tsy araka ny tokony ho izy an’ity tranonkala ity na izay rehetra ato, anisan’izany ny hoe mampiasa fomba hafa, ankoatra an’izay efa atoro ato, mba hidirana ato na hanakantsakanana ny fidirana ato;
Mampiasa fomba izay hanimba na mety hanimba an’ity tranonkala ity, na hanakantsakana ny fijeren’ny hafa na ny fidirany ato; na mampiasa an’ity tranonkala ity amin’ny fomba tsy ara-dalàna, amin-kafetsena, na amin’ny fomba mitera-pahavoazana ho an’ny hafa, na mampiasa azy ity mba hanaovan-javatra tsy ara-dalàna, hametsifetsena, na hitondrana fahavoazana ho an’ny hafa;
Mampiasa an’ity tranonkala ity mba hanaovana dokam-barotra na hivarotana entana.
Raha misy tsy hajainao ny andininy ato amin’ito Fifanekena ito, dia mbola ananan’ny Watchtower ihany ny zo hafa voalaza ato ary mampitandrina izy fa handray an’ireto fepetra ireto momba anao: Hampiato ny fahazoanao miditra ato amin’ity tranonkala ity, hisakana anao na ny ordinatera mampiasa ny adiresinao IP tsy hiditra ato mihitsy, na hangataka amin’ilay tambazotra ampiasainao mba tsy hamela anao hiditra ato amin’ity tranonkala ity. Manan-jo hitory anao koa ny Watchtower.
Mety havaozin’ny Watchtower indraindray ito Fifanekena ito. Hanan-kery avy hatrany ilay fanavaozana raha vao mivoaka, ka tokony hohajaina rehefa mampiasa an’ity tranonkala ity. Iangavianay àry ianao hijery matetika an’ity pejy ity mba hahalalanao hoe inona ny fifanekena farany manan-kery.
Lalàna sy Fitsarana Manana Fahefana Hitsara
Izay mampiasa an’ity tranonkala ity dia manaiky fa ny lalàn’ny Fanjakan’i New York, any Etazonia, ihany no hampiharina, mba hialana amin’izay mety ho fifanoheran’ny lalàna. Hoentina eo anatrehan’ny fitsarana ambaratonga voalohany na fitsarana federaly any amin’ny Fanjakan’i New York, Etazonia, ny fitoriana an’izay mandika ny andininy ato amin’ito Fifanekena ito, ary izy io irery ihany no mahefa handinika sy hitsara izany.
Raha lazain’ny fitsarana mahefa fa foana, tsy manan-kery, tsy azo ampiharina, na tsy mifanaraka amin’ny lalàna ny andininy iray ato amin’ito Fifanekena ito, dia mbola hanan-kery foana ny andininy hafa. Raha misy tsy notanterahin’ny Watchtower ny andininy voalaza ato, dia tsy hoe nofoanany akory izany, na hoe tsy manan-jo hampihatra izany intsony izy.
Iza moa Izahay Vavolombelon’i Jehovah?